Magacyada Laba Shirkadood Oo Bixinaya €6 Bilyan Oo Sannadkii Loo Qaybinayo Kooxaha Waaweyn Ee Samaystay Super League - Laacib
HomeWararka Champions LeagueMagacyada Laba Shirkadood Oo Bixinaya €6 Bilyan Oo Sannadkii Loo Qaybinayo Kooxaha Waaweyn Ee Samaystay Super League
Xalay ayaa si ramsi ah loogu dhawaaqay tartanka ‘Super League’ oo ay samaysteen 15 kooxood oo ah kuwa ugu waaweyn Yurub, kuwaas oo sannadkii kusoo darsan doona shan kooxood oo kale oo qaab isreeb-reeb ah ku imanaya.
12 ka mid ah kooxaha aas-aaseyaasha ah ayaa xalay war-saxaafadeed wada jir ah soo saaray, kuna iclaamiyey tartankan cusub oo qiime tiraya Champions League.
Lixda kooxood ee waaweyn ee horyaalka Ingiriiska Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur iyo Arsenal ayaa waxa wehelinaya Inter, AC Milan, Juventus, Atletico Madrid, Real Madrid iyo Barcelona.
Mucaaradad weyn ayay kooxahani la kulmeen xalayba, waxaana dadkii hadlay qaarkood ay sheegeen in ay tahay in kooxahan laga qaado koobabkii ay hore ugu guuleysteen, loona dhaadhiyo heerarka hoose iyadoo lagu ganaaxayo lacago badan.
Sida uu qoray wargeyska New York Times, kooxaha aas-aaseyaasha ayaa waxay mid walba heli doontaa $400 milyan xilli ciyaareedkii, waana dhaqaale aad uga badan kuwa ay hadda helaan.
Kooxaha ku guuleysta Champions League ayaa waxay UEFA siisaa lacag waxyar uun ka badan 100 milyan oo Euro, halka Super League ay kooxaha kasoo qayb-gelaya miiska u saaran tahay $400 milyan oo dollar.
PSG, Bayern Muncih iyo Borussia Dortmund oo hore ugu jiray kooxaha qorshahan qaybta ka ah, laakiin aan ku jirin naadiyadii xalay is-shaaciyey ayaa la filayaa in iyaguna ay ku biiraan tartankan.
Haddaba, su’aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay, waa ayo cidda bixinaysa lacagta intan le’eg?
15 kooxood oo min $400 milyan oo dollar qaadanay, shan kooxood oo kale oo iyaguna lacag badan helaya iyo kharashkii maamul iyo waliba lacago kale oo loo kaydiyo, ayaa ah mid aad u badan oo ay tahay in la helo cid dammaanad-qaadda, taasina haddaba waa sii diyaar.
Bangiga Maraykanka ku yaalla ee JP Morgan iyo telefishanka DAZN ayaa bixinaya lacagtan €6 bilyan oo Euro oo ku baxaya tartankan sannad walba. Qayb ka mid ah lacagtan oo u dhiganta $3.5 bilyal oo dollar waxay ka imanayaan xuquuqda daawashada ee DAZN oo bixin doona daawashooyini Online ah oo ay dadku lacag ku shubanayaan, waxaana inta kale daboolaya Baanka JP Morgan.